कुन दलको घोषणापत्र कहिले ? | Chitrawan Khabar
कुन दलको घोषणापत्र कहिले ?
काठमाडौं, चैत २७ : स्थानीय तह निर्वाचन आउन अब ३३ दिन मात्र बाँकी छ । १३ दिनपछि मनोनयन दर्ता गर्नुपर्ने निर्वाचन तालिका छ । अधिकांश राजनीतिक दलहरूले पार्टीको नीति तथा कार्यक्रम समेटिएको घोषणापत्र सार्वजनिक गरेका छैनन् ।
सत्ता नेतृत्व दलसमेत रहेको नेपाली कांग्रेका प्रवक्ता डा। प्रकाशशरण महतले चैत मसान्तसम्ममा घोषणापत्र तयारीको काम सकिने र ११ वैशाखमा सार्वजनिक गरिने बताए ।